ကိုယ်ဝန်းဆောင်ကလေးမိခင်အယောက် ၁၀၀၀၀ ကျော်လောက်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လို | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
ကိုယ်ဝန်းဆောင်လေဘေးဒုက္ခသည်များ ၃၅ ၀၀၀ကျော်ကို အမြန်ဆုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို.လိုအပ်ကြောင်း ကုလ ကျွှမ်းကျင်သူကထုတ်ဖော်ပြောကြားသွာပါသည်၊ စစ်အစိုးရအနေနဲ. နိုင်ငံတကာဝင်ရောက်ကူးညီမှုကို ငြင်းပယ်နေတဲ့ကိစ္စအပေါ် ဒုက္ခသည်ကယ်ဆယ်ရေးအေဂျင်စီတွေက အထူးရိမ်နေကြောင်း၊
ဒီအကြာမှာ စစ်အစိုးရနေနဲ. အကူးအညီလာရောက်ကူးညီနေတဲ့အေဂျင်စီတွေအပေါ် စည်းကမ်းအမျိုးမျိုးထုတ်ပြီးကန်.သတ်နေတာကြောင့် ကယ်ဆက်ရေးလုပ်ငန်းတွေနှောင်းနှေးစေနိုင်ကြောင်း၊ International Federation of Red Cross and Red Crescent Society က အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါသည်၊
နို်င်ငံတကာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားများကို ဗီဇာထုတ်ပေးဖို.နှောင့်နှေးနေဆဲရှိပြီး ဟယ်လီကပ်တားလေယဉ်နဲ. ပျံသန်းကူညီမှုကိုလည်း နှောင့်နှေးနေအောင်လုပ်နေဆဲပါ။
Up to 35,000 pregnant cyclone survivors are in urgent need of proper care in Myanmar,aU.N. expert said Wednesday, as relief agencies again raised concerns about the junta’s willingness to accept foreign aid.
“The destruction of health centers and loss of midwives have greatly increased the risks,” he said. “It is clear that many pregnant women do not have anywhere to go to deliver with skilled assistance.”
“Additional steps for seeking approval may unnecessarily delay the relief response,” the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies said inareport.
(This version CORRECTS number to up to 35,000.)